🥇အကောင်းဆုံးငွေရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများ ဇူလိုင်လ 2022 | အခမဲ့ Pro ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်။
အဖိုးတန်သတ္တုများရောင်းဝယ်ရေးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်စျေးကွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုကုန်သွယ်သည့်နည်းတူသင်၏ ၀ င်ငွေကောင်းသောစွန့်စားမှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ငွေသည်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိသောငွေကြေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောအသုံးအနှုန်းများအရအများစုမှာမူ၎င်းသည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းနှင့် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအကြားတွင်နိုင်ငံအများစုမှတရားဝင်ငွေပေးချေမှုကိုချန်ထားခဲ့သည့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်သန်းနှင့်ချီသောလူတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်နေ့စဉ်ငွေလဲလှယ်နေကြသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲစားများသည်ငွေ ၁၀၀၀ အားသင်၏ငွေကို ၁၀ ဒေါ်လာနှင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ငွေလဲလှယ်ခြင်းသည်သင်စိတ်ဝင်စားသောအရာနှင့်တူသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ပွဲစားတစ်ယောက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ငွေကုန်သွယ်မှု၏အခြေခံများကိုအသေးစိတ်သင်သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့သင်သည်ဤအဖိုးတန်သတ္တုကိုသင်ရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းများစွာနှင့်အတူသင့်ကျောဘက်သို့ကျရောက်လာပြီဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာအဘို့, ငါတို့ကိုလည်းအချို့သောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, ပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေသည့်အခါအဓိကမက်ထရစ်ထုတ်ဖော်သွားနှင့်သင်တန်း - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးငွေအရောင်းပွဲစား5။
ငွေအရောင်းအဝယ်၏ရှင်းလင်းသောအခြေခံများထက်ဘယ်မှာစတင်ရန်ပိုကောင်းသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသည့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါစေ၊ ငွေကြေး၊ ရေနံနှင့်အမေဇုံစတော့များဖြစ်စေ၊ ရည်မှန်းချက်မှာသင်ဝယ်ယူထားသည့်ပစ္စည်းထက်ပိုပြီးရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကျိုးအမြတ်အောင်။
သင်၏ပွဲစားအားသင်၏ခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြရန် - နေရာချပါ ဝယ်ခြင်း or ရောင်းချ အညီအမိန့်
သင်၏ကုန်သွယ်ရေး ဦး ထုပ်ကိုတင်သောအခါသင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတံခါးဝ၌ထားခဲ့ရန်အရေးကြီးသည်။ ရေတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်လောဘကြီးခြင်းကိုသင့်အားအလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်များချစေလိုသည်။
အတိတ်ကာလ၌လူတို့သည်အဖိုးတန်သတ္တုများနှင့်အစေ့များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ ဒီအခြေအနေမှာ, ငွေရောင်းဖို့လက်တဆုပ်စာနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ငွေကိုကာလတိုတွင်ရောင်းလိုလျှင်၊ သင်ရွေးနိုင်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ် မဟာဗျူဟာ။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်းသည်သင်၏ရာထူးကိုတစ်ရက်မပြည့်စေရန်ထိန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်စက္ကန့်, မိနစ်, ဒါမှမဟုတ်နာရီကုန်သွယ်မှုကြာချိန်နိုင်ပါတယ်။
သင်တိုတောင်းသောကာလအတွက်ကုန်သွယ်ချင်ပေမယ့်တစ်နေ့ကုန်သွယ်ရေး command များထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်များအတွက် - ထို့နောက် လွှဲကုန်သွယ် သင့်လက်ဖက်ရည်သောက်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လွှဲကုန်သွယ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာငွေအလားအလာရှိသောငွေများကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ Swing ကုန်သည်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌မည်သည့်အချိန်၌ ၀ င်ရောက်ရမည်၊ မည်သည့်အခါတွင်ထွက်ခွာမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီရန်အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်တွင်များစွာမှီခိုရသည်။
ယနေ့နှင့်အသက်အရွယ်တွင်ကုန်သွယ်မှုပြုရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ CFDs (ခြားနားချက်များအတွက်စာချုပ်များ) မှတစ်ဆင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ CFDs သည်သင်၏ပျှမ်းမျှဂျိုးအားပစ္စည်း၏သိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်မလိုဘဲငွေလဲလှယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ငွေ၏ဈေးနှုန်းသည်အဓိကအားဖြင့်စျေးကွက်၏ 'ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအား' ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖိုးတန်သတ္တုများ၏စျေးနှုန်းသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့တစ်လျှောက်လုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
အလိုလျှင် ပေးသွင်း ငွေတက်လျှင်ငွေဈေးကျလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာဝယ်လက်များအမှန်တကယ်လိုချင်သော (သို့) လိုအပ်သည်ထက်ငွေများပိုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်မည်မျှထောက်ပံ့သည်၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်သည်။ ငွေ၏စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုစစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုနည်းဗျူဟာအားနည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ရွှေ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံကဲ့သို့သောငွေများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်တွက်ချက်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာ USD သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးနှင့် ၀ ယ်လိုအားအများဆုံးငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ငွေကုန်သွယ်မှုတွင်တစ်နေ့လျှင် ၂၃ နာရီပါဝင်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စျေးကွက်ဟာနောက်ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုမစတင်ခင်မိနစ် (၆၀) နားချိန်ဖြစ်တယ်။
သင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထိုနာရီများသည်တနင်္ဂနွေမှသောကြာနေ့ညနေ ၆ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိဖြစ်သည်။ GMT အရထိုနေ့များသည်တနင်္ဂနွေနေ့ည ၁၀ နာရီဖြစ်ပြီးသောကြာနေ့ည ၉ နာရီဖြစ်သည်။
ငွေအ OTC စျေးကွက်အများစုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အကောင်းဆုံးငွေအရောင်းပွဲစားများသည်မတူညီသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်တွေ့ရှိသင့်သည်။
ကျနော်တို့အတိုချုပ်ထိမိသောအခါ, CFDs မှတဆင့်ငွေကုန်သွယ်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုလူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာငွေများကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရန်၊ ပို့ဆောင်ရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်မလိုဘဲသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
CFDs များသည်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုရိုးရှင်းစွာစောင့်ကြည့်နေသည်။ ဤသည်မှာသင်၏ပွဲစားမှဖန်တီးခဲ့သောဘဏ္instrumentာရေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာငွေ၏တန်ဖိုးသည်တက်သွားမည်၊ ကျလိမ့်မည်၊ သင်၏ပွဲစားနှင့်အတူအရောင်းအ ၀ ယ်အမှာထားမည်၊ ဤသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နှင့်အတူ '' စာချုပ် '' ဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် site ကို။
ငွေ '' ခြားနားချက်များအတွက်စာချုပ်များ '' ပေါ်မှအခိုးအငွေ့ကိုရှင်းလင်းရန်ရိုးရှင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေစျေးနှုန်းမှာ ၂၄.၀၄ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
သင်၏ CFD ပွဲစားသည်စျေးကွက်ကိုဒေါ်လာ ၂၄.၀၄ ဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေစျေးနှုန်းသည် ၂၆.၀၀ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့သည်
ဤသည်စျေးနှုန်း 8.15% ပြသ
သင်၏ CFD တန်ဖိုးသည်လည်း ၈.၁၅% တိုးလာသည်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏ CFD CFD သည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကိုအမြဲထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုမှတစ်ဆင့်ကော်မရှင်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပေးသော်လည်းငွေ CFD များကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုသင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်း CFDs အပေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားခြင်းနှင့်သြဇာမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပ၊ Australiaစတြေးလျနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့တွင်နေထိုင်ပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်မည်မျှသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ ဤသည်အရပျ၌စည်းမျဉ်းခန္ဓာကိုယ်ကန့်သတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပတို့တွင်အချိုးအစားအစား ၁၀x အဖြစ်ပြထားပါသည်။
အချို့သောနိုင်ငံရပ်ခြားသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောပွဲစားများသည် ၁: ၅၀၀ ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သင်တစ်ခုအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒုတိယအချက်ကတော့အမြတ်အမြတ်ကို ၅၀၀x လောက်မြှင့်တင်ရုံတင်မကဘဲအရှုံးကိုလည်းများများစားစားလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငွေ CFD အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာငွေဈေးနှုန်းတက်ခြင်းနှင့်မြင့်တက်ခြင်းတို့မှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
ဤသည်ကိုသွားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည် တိုတောင်းသော။ ဥပမာတစ်ခုပြပါရစေ။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်ငွေတစ်အောင်စလျှင် ၂၄.၀၄ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ကနေရာ ရောင်းချ $ 1,000 တန်ဖိုးရှိအမိန့်
လာမည့်နာရီများတွင်ငွေတန်ဖိုး ၁.၅% ကျဆင်းသွားသည်။
မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရောင်းတဲ့အမှာစာမှအမြတ် ၁၅ ဒေါ်လာရတယ်
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်သြဇာ 1:10 ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါကထိုအစုရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ငွေကုန်သွယ်မှုမှသင်၏အမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၁၅ ထက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်သည်သြဇာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်အသုံးမပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်သင့်အားများစွာအမြတ်အစွန်းပေးနိုင်သည် - သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်အခြားနည်းအတိုင်းသင်အနီရောင်ရောက်နေလျှင် အမြဲတမ်းသတိဖြင့်နင်း။
ငွေကုန်သွယ် Options ကို
CFDs များမှတဆင့်ငွေရောင်းဝယ်သူများ၏အမြတ်အစွန်းသည် CFDs မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သော်လည်းအခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။ တစ်ခုမှာငွေကုန်သွယ်ခြင်း 'ရွေးစရာများ' ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်စရာများသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်စာချုပ်ပါသက်ဆိုင်သည့်စာချုပ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်ထင်လျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်အကယ်။ ငွေစျေးနှုန်းမြင့်တက်သွား - ဝယ်ယူမှု ခေါ်ဆိုခ ရွေးချယ်စရာများ။ ၎င်းသည်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌ငွေတစ်မျိုးတည်းနှင့်ဝယ်ယူနိုင်စေသည်။
ငွေဥပမာတစ်ခုတင်ပြကြရအောင် ရွေးချယ်မှုများ ရှင်းလင်းရန်ကုန်သွယ်မှု:
သင်ဝယ်ယူလိုက်ပြီ ခေါ်ဆိုခ ရွေးချယ်မှုများ
စျေးနှုန်းသည်တစ်အောင်စလျှင်ဒေါ်လာ ၂၆.၀၀ ဖြစ်သည်
၎င်းသည်ငွေအလိုအလျောက်တန်ဖိုးကိုသင်ယုံကြည်ကြောင်းပြသသည် တက် အထက် $ 26 - ရွေးချယ်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီသို့မဟုတ်ထိုနေ့ရက်တွင်ဖြစ်စေ။
သင်၏ပွဲစားမှတစ်ဆင့်သင်စျေးကွက်သို့မ ၀ င်မီ၊ သင်ရွေးချယ်နိုင်သောစာချုပ်စျေးနှုန်း၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်
ဤရာခိုင်နှုန်းကို 'ပရီမီယံ' ဟုခေါ်ပြီးကြိုတင်ပေးရမည်
သင်၏ပွဲစားသည်သင်၏ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုစာချုပ်၏ ၃% ပရီမီယံအားကောက်ခံသည်ဆိုပါစို့
သင်၏ပရီမီယံသည်ဤကိစ္စတွင် $ 0.78 (ဒေါ်လာ ၂၆.၀၀ ၏ ၃%) ဖြစ်သည်
ဒီမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ကုန်သွယ်မှုနှစ်ခုဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များရှိပါတယ်။ အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည် 'strike price' အထက်တွင်မြင့်တက်ပါကသင်၌အခွင့်အရေးရှိပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ရင်စာချုပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပေးရမယ့်ပရီမီယံဒေါ်လာဟာ ၀.၇၈ ကိုဆုံးရှုံးမှာပါ။
မင်းထင်ခဲ့ရင်ငွေဈေးကသွားမယ် ကျ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မှီ - သင် ၀ ယ်ယူလိမ့်မည် ထား အစားရွေးစရာများ။
ငွေအနာဂတ်သည် CFD များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး၏မြင့်တက်မှုနှင့်ကျဆင်းမှုနှစ်ခုလုံးမှသင်အကျိုးခံစားရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သြဇာသက်ရောက်ရန်နှင့်သင်၏အစုရှယ်ယာမြှင့်တင်ရန်ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
silver CFDs နှင့် silver futures အကြားကြီးမားသောကွာခြားချက်မှာအနာဂတ်တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့တွင်ရှိသည်။ ကြောင်းအနာဂတ်စာချုပ်သင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ တာဝန်ရှိ အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှု (ငွေ) ကိုဝယ်ခြင်းငှါ။
အနာဂတ်ကန်ထရိုက်များ၊ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုသင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါစေ၊ ၃ လကြာလေ့ရှိသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရောက်လျှင်သင်ဝယ်ယူရမည်။ ရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့အနာဂတ်စာချုပ်များသည် 'သပိတ်မှောက်မှု' နှင့်အမြဲတမ်းပါ ၀ င်သည်။
သင် Forex စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိရန်အလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ငွေကြေးအတွဲများ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
လူအများစုသည်ဥပမာဗြိတိန်ပေါင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သောအခြားငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်ကြသည် (ဥပမာ GBP / USD) ။
ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ငွေကိုသင်၏ကုန်သွယ်မှုစင်တာဖြစ်သော XAG / USD တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
သငျသညျငွေကိုဝယ်ချင်ပေမယ့်သွယ်ဝိုက် - ငွေ ETFs စဉ်းစားပါ။ ဤ 'ငွေလဲလှယ်ရေးကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေများ' သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေ၏စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံသည်။
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) ကိုဝယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမလိုအပ်ဘဲငွေရှယ်ယာများကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, SIVR ပွဲချင်းပြီးစျေးနှုန်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ငွေသူ့ဟာသူရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေတန်ဖိုးတိုးမြှင့်လျှင်, သင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ့်မည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကုန်သွယ်မှု၏ကဏ္ aspects အမျိုးမျိုးကိုနိမ့်ကျအောင်သင်ပေးပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများအပေါ်အလင်းရောင်ပေးခဲ့သည်။
အရာအားလုံးသည်ငွေအရှိန်အဟုန်ကိုအားဖြည့်ရန်ညွှန်ပြနေသည့်အခါသင်၏ရည်မှန်းချက်မှာအမြတ်အစွန်းများရရှိရန်ဖြစ်သည် ဝယ်ခြင်း အမိန့်။
လွှဲကုန်သွယ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းထိုပွင့်လင်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သက်သေသာဓကများကလမ်းကြောင်း၏ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦး တည်နေကြောင်းညွှန်ပြနေသည်ဟုသင်ခံစားရပါကသင်ကaကိုဖန်တီးလိမ့်မည် ရောင်းချ သင့်ရဲ့ရှည်လျားသောအနေအထားထုတ်ငွေသားရန်။ ထို့နောက်သင်သည်အောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုဖမ်းရန်အပိုရောင်းရန်အမိန့်ကိုတင်နိုင်သည်။
Support Levels ကိုသုံးပါ
အထောက်အပံ့အဆင့်များကိုလည်း“ စျေးနှုန်း” အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဤအဆင့်များသည်ငွေစျေးကွက်တွင်မည်သည့်ခုခံမှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ငွေသည်အောက်ဘက်သို့ ဦး တည်နေလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် မှတ်တိုင်အဆင့် အလွန်အကျွံတန်ဖိုးကိုဆုံးရှုံးရာမှကုန်သွယ်မှုတားဆီးဖို့
တစ် ဦး ဖန်တီးခြင်းဖြင့်သတိနှင့်ကုန်သွယ် ရပ်တန့်-အရှုံး တူညီသောလိုင်းအထက်စျေးကွက်ဝင်ပြီးနောက်, ထောက်ခံမှုလိုင်းအောက်အမိန့်
ငွေ ဉီးခေါင်းရေ ငယ်ရွယ်ပြီးပုံမှန်အကျိုးအမြတ်ကိုသာအာရုံစိုက်လိုသောသူများအတွက်အလွန်မဟာဗျူဟာတစ်ခုမှာရံဖန်ရံခါမိုးရွာသွန်းမှုထက်ပိုများသည်။
ဦး ရေပြားနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုသောကုန်သည်များသည်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်စီးပွားရေးတွင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးတစ်နေ့လျှင်ကုန်သွယ်မှုမျိုးစုံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အဓိကအယူအဆမှာငွေစျေးနှုန်းသည်ကာလကြာရှည်စွာသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းတစ်ခုအတွင်း၌ရှိနေသောအခါအမြတ်အစွန်းရရှိရန်ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် 'စုစည်းခြင်းကာလ' ဟုသိကြသောကြောင့်၎င်းသည် scalpers များအား ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းနေရာများသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ငွေသည်ဤတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး, scalper သေးငယ်ပေမယ့်အလွန်မကြာခဏအမြတ်အစွန်းစေနိုင်သည်။
၎င်းသည်အဖိုးတန်သတ္တုများရောင်းဝယ်မှုလောကသို့အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်ကဲ့သို့သောအခြားလေ့လာသူကုန်သည်များလည်းများလာသည်။
လူတိုင်းကတစ်နေရာရာမှာစလုပ်ရမယ်။ မင်းကိုကူညီဖို့အကြံဥာဏ်တွေ၊ လှည့်ကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ အောက်တွင်ငွေနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သောအခါအသုံးဝင်သောအကြံဥာဏ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Silver Trading စာအုပ်များကိုဖတ်ပါ
စာအုပ်များ၊ အင်တာနက်အခြေခံသည့်ကုန်သွယ်ရေးသင်တန်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုများနှင့်အသံသွင်းစာအုပ်များပင်ငွေကုန်သွယ်ခြင်း၏အထွက်များနှင့်လေ့လာမှုများကိုလေ့လာရန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီကိစ္စကိုအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖော်ပြခြင်းမ။
များစွာသောအရာတို့သည်စျေးကွက်၏ရောင်းလိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
Silver Trading Signals ကိုသုံးပါ
အကယ်၍ သတင်းကိုမျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းကအလုပ်၏ကတိက ၀ တ်များကြောင့်သင်၏နေ့စဉ်အချိန်ဇယားနှင့်မကိုက်ညီပါကငွေရောင်းခြင်းအချက်ပြမှုများကိုစဉ်းစားပါ။ ငွေကုန်သွယ်ခြင်းအချက်ပြမှုများသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုသင့်အားပေးပို့သည်
ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) လူ (သင်၏ပွဲစားပေါ် မူတည်၍) သည်အကျိုးအမြတ်ရှိသောငွေကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေသည့်သက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ကိုစစ်ဆေးသည်။
သင်သည်များသောအားဖြင့် ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အကြံပေးချက်များရလိမ့်မည်။ ပံ့ပိုးပေးသူပေါ် မူတည်၍ အချက်ပြချက်များကိုသင်၏မိုဘိုင်း (သို့) သင်၏အီးမေးလ်စာထဲသို့တွန်းအားပေးသောအသိပေးချက်မှတစ်ဆင့်ပေးပို့နိုင်သည်။
Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတယ်လီဂရမ်အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့် Forex နှင့် cryptocurrencies ကိုအာရုံစိုက်ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားရံဖန်ရံခါငွေအရောင်းအဝယ်အချက်ပြချက်များကိုပေးပို့သည်။
တစ် ဦး မိတ္တူကုန်သွယ်ရေး Feature ကိုအသုံး
လက်တဆုပ်စာပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များကိုကုန်သည်လိုလားသူတစ် ဦး ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အရေးပေးသည် - ၄ င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုများကိုစာဖြင့်ကူးယူရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငွေများကိုပိုမို passive ပုံစံဖြင့်ကုန်သွယ်လိုသောလူသစ်များအတွက် (သို့) လူများအတွက်အလွန်မဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။
သင်ကူးယူလိုသောကုန်သည်လိုလားသူတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရှိသည် - ကိန်းဂဏန်းများ၊ သမိုင်းအရအောင်မြင်မှု၊ စွန့်စားမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်အခြေခံသည်
ထိုသူအားကူးယူရန်လိုအပ်သည့်အနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုဒေါ်လာ ၂၀၀ ထည့်ပါ
အကယ်၍ ထိုသူသည်သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုအစုရှယ်ယာ ၂.၈% ကိုငွေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် - သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစုစု၏ ၂.၈% ကိုငွေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
ငွေကိုစက္ကူဖြင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ နှင့် အတွေ့အကြုံရှိသူများလည်း။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်သောထင်ထင်ရှားရှားသောမက်ထရစ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်။ ဤသည်ကသင်၏ငွေကုန်သွယ်မှုကိုကုန်သွယ်ရန်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီသင့်သည်။
ထင်ရှားသောဖော်ပြရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း၏အခကြေးငွေဇယားနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်သင်ပြုလုပ်သင့်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်သည်။
ဥပမာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအချို့သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၂ ဒေါ်လာပိုပေးသည်ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒါကရာထူးဝင်ခြင်းနှင့်ထွက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ပါ။ သင်စဉ်းစားကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းသတိမထားလျှင်၊ ဤကော်မရှင်များတက်နိုင်သည်။ တစ်ဒေါ်လာအတွက်ဒေါ်လာ ၂၄ ပေးရတာဆိုပါစို့ ဝယ်ခြင်း နှင့် ရောင်းချ ရာထူး!
သင်၏ပွဲစားသည် ၃% ကော်မရှင်အခကြေးငွေပေးသည်ဟုယူဆပြီးပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောင်းလျှင်၊ ဒေါ်လာ ၃၀ ပေးရမည်၊ ၁.၅% သွင်းလျှင် ၁၅ ဒေါ်လာပေးရမည်။
CFDs များကိုကြည့်သောအခါအကောင်းဆုံးငွေလဲလှယ်ရေးပွဲစားအချို့သည်သင့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကော်မရှင်တစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအခကြေးငွေမယူပါ။ အဲဒီအစားသူတို့ကတဆင့်သူတို့ပိုက်ဆံလုပ်ပါလိမ့်မယ် ပျံ့နှံ့.
အခုတော့ 'အခြား' အခကြေးငွေပေါ်သို့။ ပွဲစားတိုင်းကသူတို့ကိုအားမသွင်းသော်လည်းငွေကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်လိုက်လံရှာဖွေနေသည့်အချိန်တွင်သတိထားရမည့်အခကြေးငွေအနည်းငယ်ရှိသည်။
ငွေကုန်သွယ်မှုကိုတစ်ညချင်းဖွင့်ထားသည့်အခါတစ်ညတည်းငွေကြေးသို့မဟုတ် 'လဲလှယ်ရေးအခကြေးငွေ' ကိုကောက်ခံသည်။ သင်၏အနေအထားကိုသင့်အားဖွင့်ထားခြင်းအတွက်သင်၏ပွဲစားအားပေးရမည့်အတိုးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဒီအခကြေးငွေအမျိုးအစား CFDs နှင့်အထူးဆက်စပ်နေသည်။
အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီအားလုံးကဒီအခကြေးငွေကိုမတောင်းဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါသည်။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တွင်လှုပ်ရှားမှုမရှိသည့်အချိန်တွင်ဤအထူးအခကြေးငွေကိုကောက်ခံပါမည်။ အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများအရ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်းသင့်အကောင့်ထဲသို့သင်မရောင်း ၀ ယ်ပါကသို့မဟုတ်ငွေမသွင်းပါကအခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများအားဖြင့်တစ်လလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၄၀ ကြားရှိကြသော်လည်း၊ ဤအခကြေးငွေမှာကွဲပြားနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုအချိန်ကုန်သွားပြီးနောက်သင်၌ရန်ပုံငွေများရှိပါကသင်၏အကောင့်ကိုကုန်သွားလိမ့်မည်။
တနည်းကား, ဒီအွန်လိုင်းပွဲစားတိုင်းတွင်တွေ့မြင်သောအခကြေးငွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အခြားငွေကြေးဖြင့်ငွေသွင်းလိုပါကအခကြေးငွေအနည်းငယ်ပေးဆောင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်ဤပမာဏသည်သင်၏အပ်ငွေ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် (ဥပမာ 0.5% ကဲ့သို့) ဖြစ်သည်။
သင်ဆုံးဖြတ်သည့်ပွဲစားသည်အသုံးပြုရလွယ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောငွေကုန်သည်များအတွက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးငွေအရောင်းပွဲစားများပါ ၀ င်သည့်ပလက်ဖောင်းငါးခုတွင် ၀ င်ရောက်ရန်လွယ်ကူသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိပြီးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အားလုံး၏ကုန်သည်များအတွက်လေပြေတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
သင်၏ငွေကုန်သွယ်မှုခရီးကိုစတင်နိုင်ရန်ပွဲစားတစ်ယောက်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ပွဲစားများကိုသင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များပြုလုပ်ရန်အတွက် - သင်သည်အချို့သောရန်ပုံငွေများကိုလွှဲအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုငွေဖြည့်ရန်လွယ်ကူသည် - သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့သင့်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲနှင့် PayPal၊ Neteller နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets များပါဝင်သည့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကိုလက်ခံကြောင်းသင်တွေ့ရှိသင့်သည်။ ပွဲစားတိုင်းသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။
သင့်ငွေစာရင်းသို့ ၀ င်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကပိုကြာသည်ကိုသတိရပါ။ သို့မှသာသင်၏ငွေကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစွန့်စားမှုများကို ၂-၃ ရက်ကြာနှောင့်နှေးနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးငွေအရောင်းပွဲစားများသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ လေးစားရမည့်စည်းမျဉ်းဥပဒေများမှလိုင်စင်ရရန်ကြိုးစားသည်။ ဤအဖွဲ့များသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လူတိုင်းအတွက်ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်ကိုလုံခြုံစေသည်။
ဖောက်သည်များစောင့်ရှောက်မှု၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးအတွက်ပွဲစားများကိုတာ ၀ န်ယူခြင်းအပြင်၎င်းတို့သည် client ရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။
ငွေအရောင်းအ ၀ ယ်နေရာများတွင်အလေးစားခံရဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောစည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဘဏ္Conာရေးအခွင့်အာဏာ (FCA) - ယူကေ
ကုန်စည်ဒိုင်များအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (CFTC) - အမေရိကန်
အမျိုးသားအနာဂတ်အသင်း (NFA) - အမေရိကန်
ဆိုက်ပရပ်စ် Securities and Exchange Commission (CySEC) - ဆိုက်ပရပ်စ်
ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္Financialာရေးစျေးကွက်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (FINMA) - ဆွစ်ဇာလန်
Australian Securities & Investments Commission (ASIC) - သြစတြေးလျ
ပြန့်နှံ့လေလေ၊ သင့်အတွက်ပိုကောင်းလေဖြစ်တယ်။ ငွေအ CFD အပေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားဘို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ပွဲစားများထွက်စစ်ဆေးပါ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးငွေအရောင်းပွဲစားများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အချိန်ကျပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများသည်သင်၏ငွေကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့ပွဲစားကုမ္ပဏီသည်ငွေစျေးကွက်သို့သင့်အား ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သေချာစေဖို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ငွေနှင့်ကုန်ကြမ်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာပွဲစားများစာရင်းအပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်စာရင်းပြုစုထားပြီး ၄ င်းတို့အားလုံးသည်ငွေလုံးငွေရင်း CFDs များကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားပြီးအပြိုင်အဆိုင်များပြားစေသည်။
၄။ AVATrade - ငွေကြွယ်သော CFDs များကို Tight Spreads နှင့်ကုန်သွယ်သည်
AvaTrade သည်ကုန်သည်များကိုယခုနှစ်အနည်းငယ်ကတည်းကအားပေးကူညီခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှဖောက်သည်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို ASIC, FSA, FFAJ, FSCA နှင့် ADGM တို့ကထိန်းချုပ်သည်။
AvaTrade သည်ငွေရောင် CFD နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျံ့နှံ့မှုကိုပေးသည်။ ပလက်ဖောင်းအရငွေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်အခါ ၀ ယ်သူသည် ၀.၀၂၉ ဒေါ်လာခန့်အထိပျံ့နှံ့မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်လည်းအခမဲ့ငွေပေးချေမှုသရုပ်ပြအကောင့်ကိုလည်းဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့် ၂၁ ရက်သာတရားဝင်ဖြစ်သည်။
သင်ငွေမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရောင်းဝယ်နိုင်သည့်အယူအဆကိုနှစ်သက်ပါက download လုပ်နိုင်သည့် 'AvaTradeGO' အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်၏အကောင့်ကိုရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးပြီးသင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်နှင့်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်။
MT4 /5ပရိတ်သတ်များအတွက် AvaTrade သည် third-party platform နှစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် MT4 /5ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သင်၏ပွဲစားအကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
AvaTrade သည်သင်နှင့်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားရောင်း ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောပညာရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများစွာကိုပေးထားသည်။
AvaTrade သုံးစွဲသူအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်အဆက်အသွယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်အလုပ်လုပ်သည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေအဖြစ်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်ဖြင့်ဤပွဲစားဖြင့်ငွေလဲလှယ်နိုင်သည်။
ငွေအရောင်းအပေါ် 1:10 ၏သြဇာ
၃။ Capital.com - ငွေအပေါ်ကော်မရှင်၏လွတ်လပ်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျံ့နှံ့မှု
Capital.com သည်စျေးကွက် ၃၀၀ ကျော်မှဖောက်သည် ၈၀၀,၀၀၀ နီးပါးကိုကမ်းလှမ်းသောနာမည်ကြီးသည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည် အခမဲ့ငွေ CFD သရုပ်ပြအကောင့်များ၊ ကုန်သွယ်မှုသင်တန်းများနှင့် ပညာပေးဗီဒီယိုအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဤကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတွင် လန်ဒန်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ဂျီဘရော်တာနှင့် ဘီလာရုစ်တို့တွင် ရုံးများရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ပွဲစားအား FCA၊ CySEC.၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ အပြည့်အဝလိုင်စင်ရထားပြီး စီမံခန့်ခွဲပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကုန်သွယ်မှု၏သဘောသဘာဝကြောင့်ပျံ့နှံ့အတက်အကျ။ သို့သော်စာရေးချိန်တွင်ငွေအပေါ်ပျံ့နှံ့မှုသည် ၀.၀၃၀ ဖြစ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းမှာငွေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ 0.030:1 သြဇာကိုရယူနိုင်မှာပါ။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ယူရို ၂၀၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဗြိတိန်ပေါင်သို့မဟုတ်ပိုလန်złotyဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်အခါသင်သည်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဒက်ဘစ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ Skrill ကဲ့သို့သောအီး - ပိုက်ဆံအိတ်များစသည့်နည်းအမျိုးမျိုးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ငွေငွေကော်မရှင် - အခမဲ့
ငွေကုန်သွယ်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အကောင့်တစ်ခုကိုယခုပင်ဖွင့်ပါ
အဆင့်တစ် - ငွေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြင့်စာရင်းသွင်းပါ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး ကိုတွေ့ပြီနှင့်သင်စာရင်းသွင်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤအရာကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးစာမျက်နှာပေါ်တွင်များသောအားဖြင့်ထင်ရှားသော 'sign up' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့်နှစ် - သင်၏အကောင့်ထဲသို့အပ်ငွေရန်ပုံငွေများ
လက်ခံမှု၏ drop-down list မှငွေပေးချေမှုပုံစံကိုသာရွေးချယ်ပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆင့်သုံး - မှာယူပါ
ယခုသင်၏ကုန်သွယ်မှုအသစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အသစ်စတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သင် စတင်၍ စတင်နိုင်သည်။
ငွေစျေးနှုန်းသည်မည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားမည်နှင့်သင်၏အမှာစာကိုမည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားမည်ဟုသင်ထင်သည်ကိုသာရိုးရှင်းစွာဆုံးဖြတ်ပါ။ အဖြစ်စံကိုအသုံးပြု။ အဖြစ် ဝယ်ခြင်း နှင့် ရောင်းချ အမိန့်, ကအသုံးချခြင်းဖြင့်သင်၏အန္တရာယ် / ဆုလာဘ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရကျိုးနပ်သည် ရပ်တန့်-အရှုံး နှင့် အမြတ်အစွန်း အမိန့်။
ထို့အပြင်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် Demo silver trading account ဖြင့်စတင်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သင်၏ခြေကိုရှာရန်သာမကငွေစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသင့်အတွက်မည်သည့်နည်းဗျူဟာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။
ဤကဲ့သို့သောငွေလေ့ကျင့်ရေးလမ်းညွှန်များကိုဖတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနများစွာကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် - သင်သည်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းဖြစ်သည်။
သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဗဟုသုတများ၏နောက်ကျောမှကုန်သွယ်မှုဝင်ရန်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာရန်ရှိမရှိပေါ်တွင်အခြေခံပါ။ ဒီဟာကဈေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာထက်အများကြီးပိုထိရောက်ပါတယ်။ မျက်စိကန်းသောခန့်မှန်းချက်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသောငွေကုန်သည်၏ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငွေကုန်သည်များအတွက်စာအုပ်များ၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်ပညာပေးဗွီဒီယိုများကဲ့သို့သောအထောက်အကူပြုကိရိယာများစွာရှိသည်။ ထိုအခါငွေအရောင်းအဝယ်အချက်ပြစက်များ၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်များနှင့်မိတ္တူကူးသူများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဆိုတာသေချာမသိသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ကူးနည်းနည်းစမ်းကြည့်ဖို့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအကြံပြုချက်မှာ ထိန်းညှိပွဲစားတစ်ဦးတွင် ပါဝင်ရန် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဖောက်သည် ရန်ပုံငွေ ခွဲခြားခြင်းနှင့် အခြားကာကွယ်မှုများမှ သင့်အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသိအမှတ်ပြုမှုအရှိဆုံး စည်းမျဉ်းအဖွဲ့များမှာ FCA၊ ASIC၊ CySEC၊ NBRB နှင့် အခြားလက်တစ်ဆုပ်စာတို့ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်။ တကယ်တော့ငွေကုန်သည်အများစုသည်အွန်လိုင်းတွင်အွန်လိုင်းကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ သင့်ကိုငွေစျေးကွက်များသို့ဝင်ခွင့်ပေးမည့်ပွဲစားကိုသာရှာလိုက်ပါ။
ငွေအရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုငါသြဇာသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ ငွေရောင် CFD ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များအားသြဇာအရအချိုးအစား ၁း၁၀ ကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အစုရှယ်ယာဖြင့် ၁၀ ဆပိုများနိုင်သည်။
သငျသညျသီအိုရီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အာမခံနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်မသင့်လျော်ပါ။ ETF မှတဆင့်ငွေကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အဖိုးတန်သတ္တုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်သိုလှောင်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ဟုတ်တယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမြင့်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းမှအမြတ်အစွန်းရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ CFDs မှငွေများရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ရာထူးနေရာတွင် 'တိုတိုသွား' ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။